ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦးကို ကေနဒါ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ…. – Real News
ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦးကို ကေနဒါ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ….
ပိတ်ဆို့ အရေးယူခံရသူတွေ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်း ပြီး ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်တဲ့ ဥပဒေတွေပြဌာန်း နေသလို အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုတွေလည်း ပြုနေကြောင်းနဲ့ မတရားဖမ်းဆီးမှု၊ သတင်းအချက် တွေကို ကန့်သတ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ပြောဆိုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်တွေကို ကန့်သတ်တားမြစ်နေတယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံက ပြော ပါတယ်။
အမေရိကန်တို့ အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်း ကနေဒါနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဒီကနေ့ ကြေညာတာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လစ်လျူရှု နေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ သတင်းစကားလို့လည်း ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကြေညာချက်ကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံက ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားသူပေါင်း ၅၄ ဦးအထိ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပြီး လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ဆို့ထားတာ၊ နည်းပညာနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကြေး အထောက်အပံ့ပေးရေးကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာတွေ ဆက်လက် ထားရှိထားကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တောင်းဆိုနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတူ တသားတည်း ရပ်တည်နေသလို ဒီမို ကရေစီအရ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရ ပြန်လည် တင်မြှောက်နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာက မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင်၊ မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူတွေကို မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးရေး မဟာမိတ်နိုင်ငံ တွေနဲ့အတူ ဆက်လက် တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်း ကနေဒါနိုင်ငံက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်တို့ အရေးယူပြီးနောက်ပိုင်း ကနေဒါနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဒီကနေ့ ကြေညာတာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လစ်လျူရှု နေတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ သတင်းစကားလို့လည်း ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။။
#canada #myanmarmilitary #coup #military #minaunghlaing #sanction #whatishappeninginmyanmar #voaburmese
မႏၲေလးၿမိဳ့က ကုသစရိတ္ အခမဲ့ ပလက္ေဖာင္း ‌ေ‌ဆးခန္းေလး….